အလွန်အကျွံဆန်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများမှကြည့်ရှုခြင်းပြSwedishနာများ၊ စိတ်ရောဂါပညာရှင် Inger Björklund, Goran Sedvallson - Your Brain On Porn
အလွန်အကျွံ porn (ဆွီဒင်) မှစိုက်ထူပြဿနာများ, စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန် Inger Björklund, Goran Sedvallson
မေလ 7, 2013 အပေါ် Posted, Linda Hjerten (ဂူးဂဲလ်ဘာသာပြန်ဆို) က
၎င်းသည် US ၌အချိန်အတော်ကြာလေ့လာခဲ့ပြီးသုတေသနများစွာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက် yourbrainonporn.com အပါအ ၀ င်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်သူများနှင့်ယခုလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်အတူနေရန်ကြိုးစားနေချိန်တွင်စိုက်ထူရန်အခက်တွေ့နေသည်။ အသွေးအသား။ အဆိုပါပြproblemနာကိုယခုဆွီဒင်ကိုင်ဆောင်ကြပုံရသည်။ ဒီအရေးအသားယနေ့အတွင်း၌ Dagens Nyheter ။
“ impotent of porn” ဟူသောစကားလုံးများကိုအင်တာနက်ပေါ်မှအမြန်ရှာဖွေခြင်းသည်အမျိုးသားများ၊ လူငယ်များနှင့်အချို့အမျိုးသမီးများတောင်မှဤကိစ္စကိုဆွေးနွေးသည့်အကြီးမားဆုံးဆွေးနွေးမှုဖိုရမ်အချို့တွင်အကြောင်းအရာများစွာကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုရှာဖွေရန်နှင့်စားသုံးရန်ပိုမိုလွယ်ကူလာသည်နှင့်အမျှညစ်ညမ်းမှုကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည် ပို၍ များသောအားဖြင့်ဖြစ်လာလေ့ရှိသည်။
DN သင်အလွန်အကျွံ porn ကြည့်ရှုရာမှစိုက်ထူပြဿနာများနှင့်အတူ ပို. ပို. လူပျိုတို့တွေ့ဆုံရန်ဘယ်မှာ Inger Björklund, စတော့ဟုမ်းအတွက် RFSU ဆေးခန်းမှာ psychotherapist နှင့်အတူအမိန့်တော်ရှိ၏။
- ခိုင်လုံသောလုံလောက်သောစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုဖန်တီးရန်အဖြစ်မှန်သည်လုံလောက်မှုမရှိပုံရသည်။ လူသား၏သွားများသည်တကယ့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်အသစ်သောဖြစ်ရပ်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ယနေ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုနာရီနှင့်အမျှရရှိနိုင်သည်။ In-Björklundမှ Dagens Nyheter မှ I-phones, I-pads, ကွန်ပျူတာ, ရုပ်မြင်သံကြား - ဘယ်နေရာမဆိုဘယ်နေရာမှာမဆိုသင်ပိုမိုအဆင့်မြင့်ရုပ်ရှင်တွေကိုမြင်တွေ့နိုင်သည်။
Karlskrona အတွက်ဆေးရုံမှာတိကျတဲ့ sexological ဧည့်ခံသည်။ အဆိုပါမန်နေဂျာ Goran Sedvallson porn ခွန်အားမရှိခြင်းနှင့်အတူပြဿနာကြောင့်ညစ်ညမ်းပိုပြီးသုံးစွဲနိုင်ဖြစ်လာနေသည်နှင့်အတူကြီးထွားလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ သိပ်ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်သူများသည် DN မှသူကပြောပါတယ်မကောင်းတဲ့စက်နှိုးပုံစံအတွက်ကုန်သွယ်မှုနိုင်သည်
- ယောက်ျားများသည်စစ်မှန်သောလိင်ဆက်ဆံမှုကိုပြုလုပ်သောအခါအမျိုးသားများသည်မပျော်နိုင်၊ ပျော်မွေ့မည်မဟုတ်ပါ။ သူတို့ကညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာကအရမ်းသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိတဲ့အတွက်တကယ့်ဘဝမှာပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံမှုကိုကိုင်တွယ်လို့မရဘူး။ Sedvallson က DN သို့ပြောကြားသည်မှာ၎င်းသည်တစ် ဦး ချင်းနှင့်ဆက်ဆံရေးအတွက်ပြproblemsနာဖြစ်စေနိုင်သည်။
ဒါကြောင့်တကျိပ်လုလင်ထဲကကိုးဆယ်အမျိုးသမီးငယ်ထဲကနောက်ထပ်သုံးဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်းပုံမှန် porn ကိုကြည့်ပြုသောအမှုစစ်တမ်းတစ်ခုလေ့လာမှု Ungdomsstyrelsen အရသိရသည်။
Erektionsproblem av အဘို့အ mycket porr
Skrivet တွင်း7ဗိုလ်မှူး 2013 , klockan 09: 44 | av Linda Hjerten